३२ वर्ष अगाडि अक्षयकुमारले फोटो खिच्न नपाएका घर अहिले किने ! - Sagarmatha Online News Portal
३२ वर्ष अगाडि अक्षयकुमारले फोटो खिच्न नपाएका घर अहिले किने !
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् अक्षयकुमार । बलिउडकै महँगा अभिनेतामा गनिने अक्षयकुमारको सम्पत्ती अहिले निकै धेरै छ । उनी आफ्नो नयाँ फिल्मका कारण मात्र नभई कहीलेकाही सम्पत्तिका कारण पनि चर्चामा आउने गर्छन् ।
आजभन्दा ३२ वर्ष अगाडि अक्षयकुमारले मनपरेर एक घर अगाडि फोटो खिच्न खोजेका थिए । तर उनलाई उक्त अगाडि फोटो खिच्न दिइएन । अहिले उनले त्यो घर किनेका छन् । मुम्बईको जुहु बिचस्थित् एक ठूलो घर नजिकैको घरको अगाडी उनलाई फोटो खिच्न रहर लागेको थियो ।
उनले भिडियोमा भनेका छन् आज म जुन घरमा बसिरहेको, जहाँ बसेर यो भिडिओ बनाइरहेको छु । त्यही घरमा बसेर तस्वीर खिच्न खोज्दा म र फोटोग्राफर निकालिएका थियौँ । उनले त्यो पुरानो घरमै नयाँ घर बनेपछि किनेका हुन् ।